DEG DEG: Warbaahinta Catalunya Oo Baahisay In Tababare Ernesto Valverde Lagu Wargeliyay In La Ceyrinayo | Laacib.net
January 13, 2020 Balaleti 0
Idaacada Catalunya Radio iyo warbaahinta Onda Cero ayaa labadaba sheegaya in tababare Ernesto Valverde lagu wargeliyay inuu maanta ka tagayo kooxda Barcelona oo qandaraaskiisa la kansalayo.
Labada warbaahin ayaa sidoo kale sheegaya inuu socdo haatan wadahadalka qaabkii uu ku bixi lahaa tababaraha reer Spain.
Tan iyo markii ay Barcelona ku hartay semi-finalka Spanish Super Cup oo ay guuldarro ka soo gaartay Atletico Madrid, waxaa isa soo tarayay wararka sheegaya in la ceyrinayo tababare Ernesto Valverde.
Madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa saaka soo gaaray xarunta tababarka Barcelona isagoo wadahadal la leh madaxda kale ee kooxda si ay u go’aansadaan mustaqbalka tababare Ernesto Valverde.
Waxaa sidoo kale gaaray xarunta tababar agaasimayaasha kooxda oo uu ka mid yahay Eric Abidal si ay boodhka ugu sheegaan musharaxiinta bedelka Valverde.
Xavi Hernandez iyo Ronald Koeman ayaa iska diiday shaqada tababarenimo ilaa iyo haatan halka Mauricio Pochettino la sheegay inuu haatan ugu cadcad yahay, waxaa isna isku sharaxay macalinkii hore ee Juventus Max Allegri.
Laakiin waxay u badan tahay in kooxda si ku meel gaar ah loogu dhiibi doono inta ka hartay xilli ciyaareedka tababaraha kooxda Barca B iyadoo Barcelona ay dooneyso inay xagaaga tababare joogta ah u magacowdo xiddigeedii hore ee Xavi Hernandez kaasoo haatan tababare kooxda reer Qatar ee Al-Sadd.